Stitch Labs dia manolotra fitantanana filaminana sy fitantanana mitahiry manerana ny fantsona e-varotra. Aza atao ny mametraka an-tanana isa be dia be ao anaty takelaka, mahita faktiora, na mijery fampahalalana momba ny fifandraisana. Stitch dia mamela anao hivarotra amin'ny fantsona fivarotana marobe sy hifehezana ny lisitra avy amin'ny toerana iray Stitch Features Multiple Sales Channels - Fehezo ny zava-drehetra manomboka amin'ny baikony ka hatramin'ny fandefasana amin'ny rafitra tokana. Fitantanana inventory - tazomy ny isa marina ary miantoka ny fandefasana tsara ny baiko. Fanarahana ny baiko - mandeha ho azy